Kuuriyada Woqooyi Oo Tijaabisay Guntaalo Cusub Iyo Nuuca Ay Yihiin Gantaalada Cusub Ee Ay Tijaabisay - Borama News Network boramanews.com
Kuuriyada Woqooyi Oo Tijaabisay Guntaalo Cusub Iyo Nuuca Ay Yihiin Gantaalada Cusub Ee Ay Tijaabisay
Kuuriyada Waqooyi ayaa waxa ay badda ku ridday laba gantal, taas oo noqonaysa tijaabadii shanaad ee ay sameyso todobadyadii la soo dhaafay.
Gantaallada ayaa waxaa loo malaynayaa in ridadoodu ay gaaban tahay, sida uu sheegay milateriga Kuuriyada Koonfureed.
Haddii la xaqiijiyo, tijaabada noocaas oo kale ayaa waxa ay xadgudub ku tahay 11 qaraar oo ka soo baxay Golaha Ammaanka ee Qaramada Midoobay.
Tijaabooyinka ayaa imanaya kaddib markii Madaxweynaha Mareykanka Donald Trump uu sheegay inuu “warqad qurux badan” uu ka helay hogaamiyaha Kuuriyada Waqooyi Kim Jong-un.
Mr Trump ayaa sheegay in Mr Kim uusan ku faraxsanayn dhoolatuskii milateri ee ay dhawaan wadajirka u sameeyeen Mareykanka iyo Kuuriyada Koonfureed
Gantaallada ayaa waxaa laga ganay meel u dhaw magaalada Hamhung ee gobolka Koonfurta Hamgyong waxa ayna ku dhaceen Badda Japan ee bariga gacanka Kuuriya.
Waxaa la ganay 05:34 iyo 05:50 subaxnimo ee waqtiga Kuuriyada Waqooyi, waxa ayna jareen masaafo dhan 400 km, iyadoo joogooduna uu ahaa 48 km xaweere dheereeya ayeyna ku socdeen, waxaa sidaas lagu sheegay bayaan ka soo baxay milateriga Kuuriyada Koonfureed.
Kuuriyada Waqooyi ayaa waxa ay gantay gantaallo xiriir ah tan iyo markii Mr Trump iyo Mr Kim ay shir ay bishii Juun yeesheen ku heshiiyeen in dib loo bilaabo wadahalladii lagu baabi’inayay nukliyeerka dalka
Waxyar ka hor inta aanan la qaadin tijaabadan ugu dambaysya, madaxweynaha Mareykanka ayaa waxa uu ka hadlay warqad uu ka helay hogaamiyaha Kuuriyada Waqooyi.
“Waxa ay aheyd warqad uu wanaag ka muuqanayay,” Mr Trump ayaa waxa uu u sheegay weriyayaal ku sugnaa Aqalka Cad. “Waxaan filayaa inaan kulan kale yeelan doonno. Dhab ahaantii waxa uu soo qoray warqad qurux badan, oo saddex bog ka kooban, waxaan ula jeedaa min bilow ilaa dhammaad warqaddu dhab ahaantii si qurux badan ayaa loo soo qoray.”
Maamulka Kuuriyada Waqooyi ayaa waxa uu muujiyay sida uu uga careysan yahay dhoolatuska milateri ee ay wadajirka u sameeyeen Mareykanka iyo Kuuriyada Koonfureed, iyadoo sheegtay in taasi ay xadgudub ku tahay heshiisyadii ay la galeen Mr Trump iyo Madaxweynaha Kuuriyada Koonfureed Moon Jae-in.asi.
DAAWO: Siyaasi Cabdilaahi Jeel Jire Oo Si Adag Uga Hadlay Dib U Dhaca Ku Yimid Doorashooyinka Somaliland
Dawlada Somaliya Oo Shaacisay In Ay Talaabo Ka Qaadi Doonto Shirkado Ay Sheegtay In Ay Dayeceen Xujaajta Somaliyeed
Gudiga Doorashada Oo La Kulmay Odayaasha Dhaqanka Jubaland
Jordan expresses support after terrorist attack in Somalia
Rays Wasaare kuxigeenka Somaliya “Awoodaha DF iyo dowlad goboleedyada waxaa kala saaraya Dastuurka”
Mustafe Haji July 24, 2019 July 24, 2019